फेरि संक्रमण बढ्ने चिन्ता - samayapost.com
समयपोष्ट २०७८ असार ७ गते ७:२२
धुलिखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्यविद् डा. विराज कर्माचार्यले लकडाउन खुलेपछि संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना औंल्याए। ‘तर यसअघिकै दरमा भने बढ्दैन’, उनले थपे। अहिले पनि केही जिल्लामा संक्रमणदर बढिरहेको र लकडाउनपछि ती ठाउँबाट मानिस सहरतिर प्रवेश गरेमा बढ्न सक्ने डा. कर्माचार्यको विश्लेषण छ।
दोस्रो लहरमा एकैपरिवारका धेरै जनाको मृत्यु भएकाले मानिसहरू थप सचेत बन्दा संक्रमणदर घटेको वीर अस्पतालका फिजिसियन डा. ध्रुव गैरे बताउँछन्। ‘लकडाउन गरेको तीन सातादेखि संक्रमण घट्दै गएकाले लकडाउन खुलेपछि बढ्ने सम्भावना रहन्छ’, उनले भने। ठूला सहरहरूमा एक साता लकडाउन बढाउनुपर्ने डा. गैरेको सुझाव छ। ‘लकडाउन खुल्नेबित्तिकै हिँडडुल बढ्छ। हिँडडुल बढ्नेबित्तिकै संक्रमण बढ्छ’, उनले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल संक्रमण घट्दै जानुमा आवात–जावतमा लगाइएको रोक नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन्। संक्रमणदर घट्नेबित्तिकै निषेधाज्ञा खुल्ने हो भने गत वर्षकै जस्तो पुनः ह्वात्तै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
दोस्रो लहरको कोरोना भेरियन्ट गत वर्षको भन्दा कडा र छिटो सर्ने भएकाले यसपटक सबैतिर ह्वात्तै निषेधाज्ञा खोल्न नमिल्ने उनले बताए। ‘हामीले संक्रमणको स्थिति हेरेर मात्र फरक–फरक ठाउँमा निषेधाज्ञा खोल्दै जान्छौं’, उनले भने। संक्रमण नियन्त्रणमा आउन अझै ४ देखि ६ हप्ता लाग्न सक्ने पौडेल बताउँछन्। अहिले नेपालमा संक्रमणदर २० प्रतिशत हाराहारी छ। पाँच प्रतिशतभन्दा कम संक्रमणदर भएमात्र नियन्त्रण भएको मानिन्छ। आजको नागरिक दैनिकमा पवित्रा सुनारले लेखेका छन् ।